Kuuriyada Waqooyi oo Tijaabisay Gantaalo Casari ah – Radio Daljir
Kuuriyada Waqooyi oo Tijaabisay Gantaalo Casari ah
Maarso 15, 2016 10:48 b 0
Bacaadweyn, Maarso 15, 2016 (Daljir) —Madaxweynaha dalka Waqooyiga Kuuriya Kim Jong-Un ayaa maanta sheegay inay dhawaan tijaabin doonaan gantaallada xambaara madaxyada hubka halista ah ee Nuclear-ka iyo kuwa riddada dheer.
Hanjabaada Kim Jong-un ayaa imaanaysa iyadoo xukuumaddiisa ay dhawaan ka bixinayay jawaabo adag cunno-qabteyn ay kusoo rogtay Qaramada Midoobay, iyagoo tan iyo markii xayiraada la saaaray tijaabiyay gantaallo kuwa ridada gaaban ah, waxayna tani u muuqataa farriin loo dirayo dalalka shakiga ka qaba Awoodda Nuclear-ka ee Waqooyiga Kuuriya.
Wakaaladda wararka Waqooyiga Kuuriya ayaa baahisay in madaxweyne Jong-un uu amar ku bixiyay in la isticmaalo hubka Nuclear-ka haddii waddankiisa ay soo food-saarto khatar dhinaca amniga.
Sidoo kale, Wakaaladda wararka ee Waqooyiga Kuuriya ee KCNA ayaa shaacisay maanta in Hoggaamiyaha waddankaas uu tijaabadan ku tilmaamay mid looga gol-leeyahay in lagu sii xoojiyo isku halleynta awoodda Nuclear-ka ee dalkiisa.
“Tijaabada gantaallada xambaara madaxyada hubka Nuclear-ka waa mid aan ku doonayno inaan ku xoojinno awooddeena adeegsiga hubka Nuclear-ka haddii ay khatari soo wajahdo dalkeenna… tijaabada gantaalladanna waxaa xilli dhowr ayaan ku sameyn doonnaa,” ayuu yiri Kim Jong-un, sida ay baahisay wakaaladda KCNA.